OGOW: 6-da Laacib ee Sanadkan Sabab u noqon karta in Liverpool ay u Tartanto Hanashada Horyaalka
Monday, May 20th, 2019 - 14:26:54
Wednesday August 15, 2018 - 10:50:05 in Wararka by Muuse Cabdi
Keddib markii Sanadkii lasoo dhaafay ay kooxdu soo gaartay Final-ka Champions league sidoo kalena ay ka mid noqotay naadiyada usoo Gudbay Tartankaas Sanadkan, waxay suuqa ka sameysay isbeddel weyn.
Liverpool ayaa ah kooxda ugu dhibka badan ee ay wajihi doonto Manchester City marka laga hadlo hanashada horyaalka, iyadoo 100 City ay ku qaadday Horyaalka Sanadkii tegay, waxay sidoo kale Sanadkan dooneysaa in ay difaacato hanashada horyaalka.
Si waliba kooxda Man City ayaa waxay loollan adag kala kulmi doontaa Liverpool oo saf ka xooggan midkii xagaagii hore sanadkan horyaalka lasoo geleysa, waxayna Reds heysataa ilaa 6 ciyaartoy oo Sanadkan suuragal ka dhigi kara in kooxdu ay hanato horyaalka iyo Koobab kale.
Halkan ka ogow 6da ciyaartoy
#6 Alisson Becker
Goolhayahaan ayaa laga soo qaatay kooxda Roma, waana mid ka mid ah shabaq jireyaasha ugu fiican waqtigan Kubadda cagta, wuxuuna ka mid yahay meelaha dhibaatada ugu badan Liverpool ay ka heysatay xiddigaha daboolaya.
Waa magac si weyn looga garanayo Merseyside, Virgil Van Dijk wuxuu sii wataa bandhiggiisa fiican ee kooxda. Ninkan ayaana ka caawiyay kooxda Liverpool in ay si dhaqso ah uga soo bogsato xanuun dhanka difaaca ah oo ay wajaheysay wuxuuna xagaagii hore bartamihiisa yimid Anfield intii lagu jiray Suuqii jiilaalka.
Laacib sidaan oo kale u bandhig wanaagsan Jurgen Klopp ayaa la doonayay safka kooxdiisa. Keddib markii 365 maalmood la sugayay, Naby Keita ayaa ugu dambeyn soo banneeyay shaqadii uu ka hayay RB Leipzig si uu ugu soo wareego Liverpool xagaagan, waana mid kale oo ka mid ah ciyaartoyda Sanadkan ay koobabka ka fileyso Reds.
Xagaaga cusub ee Premier League waa fursad usoo bidhaantay laacibka dalka Senegal, Sadio Mane si uu usii wato bandhiggiisa fiican ee garoonka Anfield stadium. Keddib markii waxqabad fiican uu sameeyay Sanadkii hore, Reds ayaa markan isu diyaarineysa hanashada horyaalkeedii ugu horreeyay ee Premier League xagaagan.
Gooldhaliyaha reer Brazil Roberto Firmino wuxuu noqon doonaa, mid looga fadhiyo in yool fiican uu ku yeesho safka Liverpool ee raadinaya Koobabka Sanadkan. Tan iyo imaatinkiisii Anfield 2015, weeraryahankan ayaa ka mid ahaa hubka ay ku duusho kooxdiisa isagoo wacdare ka dhigay horyaalka sare ee England.
Keddib markii uu jebiyay dhowr rikoodh sanadkii hore Liverpool ayaa dooneysa in Mohamed Salah oo dhaliyay 44 gool caawiyayna 16 kale, uu noqdo hoggaamiyaha kooxda Merseyside, dhammaan indhaha ayaana haya Sanadkan waxa uu ka qaban doono horyaalka England, sidoo kalena Koobab iyo Goolal ayaa looga fadhiyaa laacibka reer Masar.
Lixdaas ciyaartoy ayaa ah kuwa Sanadkan ay taageerayaal badan oo kooxda Reds ah ka sugayaan hanashada Koobabka ay ka qeyb geleyso Qaar ka mid ah.